Mpivarotra eny Mahamasina : Midongy tsy hanara-dalàna -
AccueilSongandinaMpivarotra eny Mahamasina : Midongy tsy hanara-dalàna
Nanomboka tamin’ny alarobia teo dia tsy nahazo nivarotra eny Mahamasina intsony ireo mpivarotra amoron-dalana. Nisy ny fandaminana nataon’ny tompon’andraikitra amin’iny toerana iny, ka nasiana tsato-by eraka ny sisin-dalana, mba tsy ahafahan’izy ireo mivarotra eny intsony. Manoloana io famefena io toerana io, dia nidina an-dalambe ireo mpivarotra milanja soratra be nanomboka io alarobia io ho fanehoana ny tsy fanekena fanalana azy ireo, ary fitakiana ny fiverenan’izy ireo eo amin’io toerana io. Mpivarotra manodidina 70 eo ireto nesorina tamin’iny sisin-dalana iny. Omaly dia polisim-pirenena ampolony no tonga teny an-toerana nandamina azy ireo.
Nomarihan’ireo mpivarotra fa tsy hiala eny mihitsy ry zareo, satria eny no hahazoan’izy ireo, eny no tian’izy ireo, ka na omena toerana hafa izy ireo dia tsy hifindra. Mbola nohamafisin’izy ireo fa tsy eo amin’ny arabe izy ireo mivarotra fa eo amin’ny sisiny. Sisin-dalana izay marihina fa an’ny mpandeha an-tongotra fa tsy an’ny mpivarotra velively. Voatery midina eny amin’ny arabe mantsy ireo mpandeha an-tongotra amin’iny toerana iny, ka mila ho voahitsaky ny fiara mihitsy satria teritery iny lalana. Ny fiara rahateo tsy te-hahalala anao izany. Efa betsaka mihitsy ny mpandeha an-tongotra amin’iny lalana iny no domina “rétroviseur” ny fiara noho izay fahaterena izay. Toa ny efa mahazatra izany, dia midongy tsy hanara-dalàna foana ireo mpivarotra, ary manao mafy loha tsy mety halamina. Etsy ankilany anefa, tsy hihemotra ny tompon’andraikitra fa tsy maintsy handraisana fepetra izy ireo. Marihina fa amin’ny andavanandro izy ireo no tsy mahazo mivarotra, fa afaka mivarotra kosa rehefa tsenan’Alakamisy.